Zvisunge iwe: mimhanzi yave kuda kuchinja zvachose paApple Music | Ndinobva mac
Zvisunge iwe pachako: mimhanzi yave kuda kuchinja zvachose paApple Music
Makuhwa anoratidza kuti musi wa18, mangwana, tichava nenhau paApple Music. Sezviri pachena tichava neHi-Fi odhiyo yemhando muApple Music. Asi kana tikaenda padanho, isu tine kuti makuhwa akawedzera nekutenda kune yakasarudzika chiziviso kubva kukambani inoverenga seizvi Zvisunge iwe pachako: mimhanzi yave kuda kuchinja zvachose.
Zvisunge iwe pachako: mimhanzi yave kuda kuchinja zvachose. Aya ndiwo maratidziro akaita Apple nhau dzeramangwana dzinogona kuitwa muchikamu cheApple Music. Kwete chete chiziviso ichi chinoitika pakati peHi-Fi odhiyo yemhando yepamusoro, asi kune zvakare kutaura kwekutanga kweAirPods nyowani zvinoenderana ne nhau mune odhiyo.
Zvino, mareferenzi e "Apple Isina Kurasika", "Mahara Asina Kurasika", "Hi-Res Asina Kurasika" uye "Dolby Atmos" akawanikwa mukati mewebhu application Apple Music by 9to5mac. Aya mareferenzi anoratidza kuti Apple ingango ronga kuzivisa kuti vashandisi vanozokwanisa kufambisa nziyo nemhando yepamusoro uye vangangozvinakidzwa neimwe nzira yeSpatial Audio vachishandisa Dolby Atmos ine AirPods Pro uye AirPods Max.
Iyo yekuwedzera kodhi inoratidzawo kuti chete dzimwe nziyo dzinogona kuve pasina kurasikirwa kwakadai, uye odhiyo kutenderera Dolby Atmos, sezvo Apple iine mareferenzi kakawanda kubheji iyo inoti yarasika uye / kana ine Atmos. Izvo zvinogona kuratidzwa pamwe chete nenziyo dzinoenderana mukati meApple Music.
Iwo mareferenzi kune emhando yepamusoro uye asina kurasikirwa kushambadzira akatowanikwa mune yekutanga beta yeiyo inotevera iOS yekuvandudza, vhezheni 14.6. Iyo ruzivo pamatanho asina kurasikirwa kana HiFi muApple Music Hi yakatanga kekutanga kekutanga kwaMay uye maererano neshumo iyoyo, Apple Music ine iyo nhanho nyowani yemhando yemimhanzi ichava nemutengo wakafanana nanhasi. Ndokunge, 14.99 euros pamwedzi muhurongwa hwemhuri, 9.99 mune wega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Zvisunge iwe pachako: mimhanzi yave kuda kuchinja zvachose paApple Music
Instagram bvunzo bhurawuza rutsigiro